I-Apple iguqula imvelaphi ye-portal yayo iCloud.com ye-animated | Ndisuka mac
I-Apple iguqula imvelaphi ye-portal yayo iCloud.com ye-animated one
Isenokuba ayikaqapheli okwangoku ukuba awuhlali ufikelela kwisango iCloud.com rhoqo. I-Apple, nangona singayiqondi, iyaqhubeka nokuphucula inkonzo yayo yelifu imihla ngemihla kwaye kule meko iguqule imvelaphi yewebhu entsha ukuze ibenokubukeka okungqinelanayo.
Iphepha lodonga elalinayo iwebhusayithi yeICloud.com xa sasihamba yayiyigradient ukusuka kumbala otyheli-orenji ukuya kuluhlaza okwesibhakabhaka, ukulinganisa indlela esuka emhlabeni iye ezulwini. Ukuba ndikuxelela inyani, kwasekuqaleni ndathi le ngxowa-mali ayenzi bulungisa kwiwebhusayithi eyenziwe yi-Apple Ke ngoku ukuba bayiguqulile, ndikwazile ukungqina ukuba bendinyanisile.
Ukuba singena kwilifu le-Apple ukusuka kwiwebhu www.iCloud.com Siza kubona ukuba imvelaphi ye-gradient ebekuyo kangangeminyaka itshintshile yangumqolomba omtsha ophilayo onika umba wokuhlaziya kule portal. Ngoku, iApple isukile kwithambeka njengoko sichazile apho uhlobo oluthile lwamaqamza abonakala efanisa ulwelo okanye amasuntswana.Ilifu kulwelo? Ngaba amasuntswana elifu mhlawumbi?
Ngokuthanda izinto, imibala, kwaye nangona imvelaphi yeyokuba incasa yam iphumelele ngakumbi, kuya kubakho abayili abaninzi bewebhu abathi Ngowuphi umntu ophetheyo ukuyila le webhusayithi ucinga?
Nokuba kunjani, into ebalulekileyo kukuba siyabona ukuba iApple iyaqhubeka nokubandakanya ukulungiswa kunye nokuphuculwa kwewebhusayithi yayo ye-Cloud.com, uphuculo oluya kuqhubeka ukwanda kwaye ndisalikhumbula ilungelo lobunikazi eliqinisekisayo ukuba siya kuba nakho usetyenziso nakweyiphi na ikhompyuter ye-Mac apho sinxibelelana ne-ID yethu ye-Apple Okwangoku sineofisi yeWork office, imeyile, abafowunelwa, amanqaku, iifoto, ikhalenda, izikhumbuzo,.... Ixesha liza kusixelela ukuba iApple iyaqhubeka nokuqhuba usetyenziso lokusebenzisa i-Intanethi okanye hayi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-Apple iguqula imvelaphi ye-portal yayo iCloud.com ye-animated one
UFernando Sandoval sitsho
Into endizibuze yona kukuba kutheni ungakwazi ukufikelela kwela phepha kwi-iPhone
Phendula uFernando Sandoval
UAndres Hualca sitsho
Iya kuba yinto engafunekiyo. Ukuba yonke into onayo kweli phepha ikwiselfowuni yakho, kutheni ufuna ukungena phaya, kunye nomba wokhuseleko wokujonga i-iPhone yam:
Phendula u-Andres Hualca
Gcina ii-AirPods zakho zikhuselekile kwaye zibethelelwe ezindlebeni zakho xa ubaleka
Ukujonga kwangaphambili kweTekhnoloji ye-Safari 29 ngoku iyafumaneka